धेरैलाई रुवाएको छ हङकङ आईडीले - अनुभव - साप्ताहिक
‘हङकङमा स्थायी रूपमा सात वर्ष बसेपछि यहाँको सिटिजनसीप (आईडी कार्ड) प्राप्त हुन्छ, यही आईडीको बेचबिखनमा लिप्त गिरोहकै कारण कतिले घरबार बिगारेका छन्
भने कतिले भएभरको सम्पत्ति रित्याएका छन् ।’
तिमीलाई ‘हङकङमा स्थायी रूपमा सात वर्ष बसेपछि यहाँको सिटिजनसीप (आईडी कार्ड) प्राप्त हुन्छ, यही आईडीको बेचबिखनमा लिप्त गिरोहकै कारण कतिले घरबार बिगारेका छन्
भने कतिले भएभरको सम्पत्ति रित्याएका छन् ।’ पुर्‍यायो आईडी कार्डैले, मलाई घाइते बनायो तिम्रै आईडीले....’ लगभग एक दशकअघि सिर्जित यो गीतको भाव आज पनि उत्तिकै वास्तविक लाग्छ । हङकङप्रतिको मोहकै कारण धेरैको सम्पत्ति मात्र होइन, निःस्वार्थ माया गर्ने हजारौं मन तोडिएको छ । के पैसाले प्रेम किन्न सकिन्छ ? सबैको उत्तर सकिँदैन भन्ने नै आउँछ तर जीवन र प्रेमका अनेक मोडमा पैसा कतै न कतै आवश्यकता बनेर आइदिन्छ । हङकङ र आईडी नङ र मासुको सम्बन्ध भएका निर्जीव वस्तु हुन्, जसले चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङमा बसोबासका लागि अनुमति प्रदान गर्छ । आईडीको प्राप्तिसँगै नागरिकसरह सेवा–सुविधाका साथै आकर्षक कमाइ नै हङकङको प्रमुख आकर्षण हो ।
विभिन्न देशका मानिसहरूको व्यापार–व्यवसायको हब भएकाले पनि सम्भावना प्रचुर भएको देश हो— हङकङ । यदि आफूमा क्षमता, लगाव, सीप र लगानी गर्ने पुँजी छ भने हङकङ एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छ । बैंकिङ सिस्टम र पर्यटकीय दृष्टिकोणले गर्दा पनि हङकङमा व्यापारका लागि प्रचुर मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिन्छ ।
हङकङमा स्थायी रूपमा सात वर्ष बसेपछि यहाँको सिटिजनसीप (आईडी कार्ड) प्राप्त हुन्छ, यही आईडीको बेचबिखनमा लिप्त गिरोहकै कारण कतिले घरबार बिगारेका छन् भने कतिले भएभरको सम्पत्ति रित्याएका छन् ।
 मलाई हङकङ लान्छु भनेपछि लाखौं रुपैयाँ एडभान्स दिएँ तर अहिलेसम्म लगेको छैन, मलाई जस्तै धेरैलाई हङकङ लान्छु भन्दै पैसा कुम्ल्याएको रहेछ अहिले सम्पर्कमा छैन ।
 डिपेन्डेन्सी दिन्छु भन्दै हङकङ ल्यायो, सबै पैसा पनि अगाडी नै दिएँ, अहिले भिसा थप्ने बेलामा फेरि पैसा माग्छ ।
 नक्कली विवाह गरेकै कारण श्रीमान् दुःखी हुनुभयो । सात वर्ष हङकङमा आईडीका लागि दुःख गरें, तर अन्त्यमा छोराछोरी–श्रीमान् कोही आफ्ना भएनन् ।
 हङकङ लान्छु, आईडी दिलाउँछु भन्दै झूटो प्रेम गर्‍यो, मेरो इज्जत पनि गुम्यो अब कसरी समाजसामु मुख देखाउनु ?
यस्ता आवाज यत्रतत्र सुनिन्छन्, कति बाहिर आउँछन्, कति भित्रै दबिन्छन् । यी त भए प्रतिनिधि पात्र मात्र । आईडी पाउनकै लागि विवाह गरिन्छ, सिउँदोमा सिन्दूर हालेर, प्रेमी बनेर मीठा–मीठा कुराकानीका म्यासेजहरू लेखिन्छन्, फोटोहरू खिचिन्छन् तर सबै नक्कली ।
सरकारसामु देखाइएको नक्कली प्रेम कागजी रूपमा सक्कली बनिदिन्छ, अन्त्यमा मानिसले पाउँछ फगत हङकङ बस्ने अनुमति । पैसा र सम्पन्नताका लागि आफ्नो मान्छे कागजी रूपमा अरूकै बनिदिँदा पक्कै पनि मन दुख्छ ।
हङकङमा नक्कली विवाह गरिएको सम्बन्धमा थुप्रै समाचार आए, धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सचेतनाका लागि त्यसलाई सेयर गरे । समाचारमा सम्प्रेषण गरिएका शब्दले सवैको मन पोल्छ । गलत काममा आफ्नो समुदाय मुछिएको प्रति धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
किन लाखौं, करोडौं खर्च गरेर हङकङ आउन चाहन्छन् नेपालीहरू ? अत्याधुनिक सहर, स्वतन्त्रता र विदेशको रंगीन सपना सबैको मनमा हुन्छ ।
तपाईं नक्कली सम्बन्धमा मजबुत प्रमाणपत्र बोकेर हङकङ आउनुहुन्छ, सबै समयअनुसार राम्रै भयो भने त्यो तपाईंको भाग्य तर तपाईको नक्कली प्रेम र विवाह सबैका सामु नक्कली सवित भयो भने ? तपाईंले जसका लागि यति टाढा आउने सपना सजाउनुभएको छ, उनको मनमा तपाईंप्रति घृणा पलायो भने ?
बिट्रिस साम्राज्यबाट विकसित हङकङ चीनको स्वाशासित क्षेत्रका रूपमा मुस्कुराउने क्रममा अनेकन परिवर्तन आए, सँगै नेपाली सपना र आईडीको मोह पनि ।
लाहुरेको सहर भनेर चिनिने हङकङको आफ्नै गौरवमयय इतिहास छ । वीर गोर्खालीको साखलाई अझै पनि मर्न दिएका छैनन् हङकङका केही नेपालीहरूले । सुरक्षाका रूपमा बलिष्ठ र कर्मनिष्ठ मात्र नभएर व्यापार, व्यवसाय र शिक्षाको क्षेत्रमा समेत अब्बल रूपमा आफुलाई अग्रसर बनाइरहेका छन् नेपालीहरूले यहाँ । यहीं जन्मिई–हुर्किएका नेपाली युवाहरूको सफलताबाट सिंगो देशले नै गौरव गर्न सक्ने स्थिति विकसित हुँदैछ ।